Shukulaatada Soosaarayaasha Qalabka Macmacaanka | Yinrich
Khadka Soo saarista Nacnaca Adag
Khadka Dhigashada Nacnaca Adag
Khadka samaynta nacnaca adag
Khadka wax soo saarka nacnac
Khadka Dhigashada nacnac
Khadka samaynta nacnaca
Mashiinka Dhimashada Nacnaca Flat & Duubista
Khadka Soo saarista Nacnaca ee Toffee & Chewy
Khadka Dhigashada Toffee
Khadka samaynta nacnaca jilicsan
Mashiinka Goynta iyo Nacnaca ee Qashin-qubka ah
Khadka Soo saarista Nacnaca Jelly
Jelly Candy Line Depositing
Mashiinka Jelly Mogul
Khadka wax soo saarka Marshmallow
Khadka Marshmallow ee la dhigay
Khadka Marshmallow Extruded
Xanjada iyo Khadka xabagta
Nooca Barkinta Khadka Xanjada
Hollow Nooca Xabadada Xumbo
Nidaamka Miisaanka Tooska ah (aws)
Rapid Gaaxnuug System (rds)
Fiish Qolka Kushiinka (fcc)
Karinta Filimka khafiifka ah (bm)
Cutubka karinta faakuumka-caqliga leh (bjc)
Mashiinka jelly/marshmallow-kariye joogto ah (cjc)
Mashiinka Faakuumka Caalamiga ah (tc)
Suunka qaboojinta (scb)
Khadka samaynta shukulaatada
Khadka Wax-soo-saarka Lentil
Mashiinka Enrobing Chocolate
Mashiinka Buuxinta Buskudka
Buuxinta Macaroon iyo Mashiinka Cafiska
Mashiinka Xirmooyinka Nacnaca
Adeegga Iibka Kadib& dammaanad
Wershadaha Nacnaca, Choco iyo Rootiga oo aad ku kalsoon tahay
Qalabka macmacaanka ayaa ah khadka isku xirka soo saarista nacnaca. Yinrich waa soosaarayaasha qalabka macmacaanka ee xirfadda leh ee Shiinaha, waxay leedahay mashiinka samaynta dahaarka shukulaatada, qalabka macmacaanka ee iibka ah. Mashiinada macmacaanka waa mid aad u xirfad badan, ku qalabaysan qalabka karinta macmacaanka, qalabka farsamaynta macmacaanka, baakadaha macmacaanka, iwm.
Khadka dhigaalka nacnaca jelly
Taxanaha YINRICH's GDQ waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu sameeyo nacnaca jelly ee aan istaarijka lahayn, awoodda laga bilaabo 70kgs/h ilaa 500kgs/saacaddii. Qalabka taabashada HMI ee loogu talagalay hawlgal fudud; Bambooyin qiyaas ah oo loogu talagalay duritaanka tooska ah ee midabada, dhadhanka iyo asiidhka; Xariijimo laba-midab ah, laba midab oo labajibbaaran, buuxin dhexe, iyo nacnac jelly oo cad ayaa lagu samayn karaa khadkan. Dhigashada servo-ku wado waxa gacanta ku haya barnaamijka PLC.
Khadka marshmallow dibadda ah
Mashiinka taxanaha EM waa in cufka uu hawo-qaado hawo-qaadiyaha YINRICH, ka dibna loo qaybiyo durdurro badan. Dhadhan iyo midab ayaa lagu duri doonaa durdur kasta. Kadibna waxaad soo saari kartaa noocyo kala duwan oo soo jiidasho leh oo leh YINRICH's extruder gaar ah, sida hal midab, midabyo isku dhafan, midab 4 ah oo qalloocan, iyo xitaa alaabada extruded ka buuxsantay.
khadka dhigaalka nacnac
Taxanaha YINRICH ee GDL waxaa loo sameeyay samaynta nacnac la shubay, awood laga bilaabo 120kgs/h ilaa 500kgs/saacadii. Qalabka taabashada HMI ee loogu talagalay hawlgal fudud; Bambooyin qiyaas ah oo loogu talagalay duritaanka tooska ah ee midabada, dhadhanka iyo asiidhka; Xariijimo laba-midab ah, laba midab oo labajibbaaran, buuxin dhexe, iyo nacnac cad ayaa lagu samayn karaa khadkan. Dhigashada servo-ku wado waxa gacanta ku haya barnaamijka PLC. Nidaamka galinta tooska ah ayaa diyaar ah.
Muuqaalkani waa mashiinka sandwich (daboolka buskudka) ay samaysay Yinrich, kaas oo ah khadka isku dhafka buskudka, mashiinka buskudka ee sandwich. Yinrich waa xirfadlesoo saaraha qalabka macmacaanka. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale bixisaa mishiinno sandwich ah oo kala duwan (capper cookie) iyo mashiinada buskudka kareemka ee warshadda wax soo saarka buskudka.Mashiinkan taxanaha ah ee JXJ sandwich (capper buskud) waxa lagu xidhi karaa gudbiyaha warshada samaynta buskudka, waxa uuna si toos ah u toosin karaa, dhigaal iyo dabool xawaare dhan 300 oo saf oo cookies ah (150 saf oo sandwich ah) daqiiqadii. Noocyo kala duwan oo buskud jilicsan iyo adag ah, keega waxaa lagu farsamayn karaa mashiinka sandwich (capper cookie). Waxa kale oo lagu quudin karaa feederiyaha joornaalka buskudka iyo habka tusmaynta. Mashiinka buskudka sandwich-ka ayaa markaa toosiya, urursada, isku daraa alaabta, dhigaa qadar sax ah oo buuxin ah, ka dibna koofiyadaha ugu sarreeya alaabta. Sandwich-yada si toos ah ayaa loogu raray mishiinka wax duubista, ama mishiinka wax lagu duubo si loo sii wado. Tani waa sida mashiinka sandwich-ka (capper buskudka) u habeeyo buskudka.Tilmaamaha Farsamo ee ugu Muhiimsan ee Khadka Kulanka Kukiyada:Awoodda wax soo saarka: qiyaastii 14400 ~ 21600 sandwiches / minSoosaarka qaybaha la qiimeeyay: 30 pcs/minMadaxda dhigaalka: 6 ilaa 8Madaxyada koofiyadaha buskudka: 6 ilaa 8Awoodda: 380V/12KWBallaca suunka: 800mmCabirka: L:5800 xW: 1000 x H:1800mm
Ilaa hadda YINRICH waxay si guul leh u siisay mashiinka shukulaatada, qalabka farsamaynta macmacaanka, qalabka baakadaha macmacaanka, iyo noocyada kale ee qalabka macmacaanka macaamiisheena ku nool in ka badan 60 waddan iyo gobollada adduunka. YINRICH waxa ay rakibtay oo ay dhamaystirtay in ka badan 200 oo khadadka wax soo saarka ah iyo qalabka macmacaanka, waxa ayna macaamiisheena la samaysay shirkad iskaashi oo wakhti dheer ah. Waxaan si daacad ah ugu mahadcelineynaa hoosta shuraakadayada (ma wada qori karno):
YINRICH® waa hormuudka iyo soo-saareyaasha qalabka macmacaanka iyo dhoofinta ee Shiinaha si ay u bixiso qalabka farsamaynta macmacaanka oo tayo sare leh, mashiinka samaynta shukulaatada iyo farsamaynta rootiga iyo mashiinnada baakadaha, kuwaas oo leh warshad ku taal Shanghai, Shiinaha. Sida shirkadda ugu sareysa ee ugu sareysa ee shukulaatada iyo qalabka macmacaanka ee Shiinaha.
YINRICH waxay soo saartaa oo ay siisaa qalab dhamaystiran oo kala duwan oo loogu talagalay shukulaatada iyo warshadaha macmacaanka, laga bilaabo hal mashiinno si ay u dhamaystiraan khadadka leexashada, ma aha oo kaliya qalabka macmacaanka ganacsi ee horumarsan oo leh qiimo tartan leh, laakiin waxtarka dhaqaale iyo sare ee habka xalinta macmacaanka oo dhan. iyo soosaarka shukulaatada.
Waxaan bixinaa naqshadeynta, wax soo saarka, iyo isu-ururinta qalabka macmacaanka yar iyo kuwa dhexe iyo khadadka samaynta shukulaatada si waafaqsan baahida gaarka ah ee macaamiisha.